Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Thailand dia mametra ny fandrarana ny sidina an-trano 14 andro
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Foana sy mangina ny seranam-piaramanidina Hat Yai any amin'ny faritanin'i Songkhla any Thailand. Ny hany famantarana ny ain'ny olombelona dia ny mpiambina miasa.
Thailand dia nametraka fandrarana sidina an-trano 14 andro ho an'ny faritany amin'ny faritany mena sy faritany maizina.
Ny fandrarana dia hanomboka amin'ny 23 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra 2021, farafaharatsiny.
Ny ankamaroan'ny tranga vaovao dia misy ny karazana COVID-19 Delta, miaraka amin'ireo vaksiny tsy haingana dia haingana mba hamorona tsimatimanota andiany.
Mba hifehezana ny coronavirus COVID-19 dia nambara ny fandrarana ny sidina ary mihatra avy hatrany ny fanaraha-maso henjana. Eo ny toerana fanamarinana sy fizahana fizahana fizahana eo amin'ireo faritany mena sy faritra hafa.
Tranga COVID-19 vaovao dia voarakitra isan'andro ao amin'ny faritanin'i Songkhla atsimo miaraka amina vondrona vaovao ao amin'ny tsenan'i Sapsin lehibe ao amin'ny distrikan'i Muang. Ny biraon'ny kaomina Nakhon Songkhla dia nanidy ny tsena nandritra ny 7 andro nanomboka androany 22 Jolay, hatramin'ny 28.
Ny Fahefan'ny fizahan-tany an'ny Thailand (TAT) dia nanome fanavaozam-baovao momba ny fetra farany misy ny famerana COVID-19 nambara ho an'ireo faritany 13 voafehina fatratra sy henjana na faritany mena mena.
Ireo tranga vaovao dia misy ny karazana Delta, indrindra amin'ireo vondrona marefo (60+ taona sy ireo izay manana aretina ifotony), ary ny ankamaroan'ny aretina dia avy any an-trano avy ao anatin'ny fianakaviana. Na eo aza ny fiezahana hanafaingana ny vaksiny, mbola ilaina ny fotoana hananganana tsimatimanota andiany.
Ny Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) dia nanampy an'i Ayutthaya, Chachoengsao ary Chon Buri tao amin'ny faritra mena mena ary nahatratra 13 ny isan'ireo faritany ankoatra an'i Bangkok, sy ireo faritany 5 manodidina - Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani , Samut Prakan, ary Samut Sakhon - ary faritany atsimo Thai atsimo - Narathiwat, Pattani, Songkhla, ary Yala.
Ny fitateram-bahoaka dia avela hiasa amin'ny 50 isan-jaton'ny haben'ny fipetrahana fotsiny ary tsy maintsy mampihatra ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina. Ny tompon'andraikitra akaiky dia miantoka ny fahaizan'ny serivisy fitaterana, indrindra ho an'ireo olona manana fanendrena vaksiny.
Afaka misokatra isaky ny ora ara-dalàna ny trano fandraisam-bahiny, saingy tsy mahazo manao fivoriana, seminera na fanasana rehetra. Ny fivarotana fivarotana sy tsena vaovao dia avela hisokatra hatramin'ny 2000 ora. Ireo fivarotana fivarotana 24 ora rehetra dia tsy maintsy mihidy isan'alina eo anelanelan'ny 2000-0400 ora.
Nasaina hakatona ny 23 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra - na mandra-pahatongan'izany - dia kianja fanatanjahantena, zaridainam-panjakana ary zaridaina botanika, karazana toeram-pifaninanana, ivon-fampirantiana, ivon-toeram-pivoriana, toerana fampisehoana ampahibemaso, ivontoerana fianarana sy galeria, tranomboky, tranombakoka , valan-javaboary manan-tantara sy toerana arkeolojika, ivon-toeram-pitsaboana, salona hatsaran-tarehy, mpanao volo, fivarotana manicure sy tatoazy ary dobo filomanosana.
Ny trano fisakafoanana sy ny fisakafoanana dia avela hanolotra serivisy fitaterana entana mandra-pahatongan'ny 2000 ora. Ireo tranombarotra sy magazay ary toeram-pivarotana dia avela hisokatra mandra-pahatongan'ny 2000 ora ary ny fivarotana lehibe, fivarotam-panafody ary kojakoja fitsaboana ary foibe fanaovana vaksiny ihany.
Ny fiambenana amin'ny alina dia mijanona tsy miova eo anelanelan'ny 2100-0400 ora. Na izany aza, mandritra ny 7 ora alina dia angatahina ny olona hijanona ao an-trano ary hivoaka raha ilaina.
Avela hisokatra hatrany amin'ny fepetra mifehy ny aretina henjana dia ny hopitaly, toeram-pitsaboana, tobim-pitsaboana, fivarotam-panafody, fivarotana, ozinina, banky sy serivisy ara-bola, ATM, serivisy fifandraisan-davitra, serivisy ho an'ny paositra sy fonosana, fivarotana sakafo ho an'ny biby fiompy, fitaovam-panorenana sy fivarotana enta-mavesatra. fivarotana mivarotra kojakoja ilaina isan-karazany, fivarotana lasantsy mahandro, tobin-tsolika ary serivisy fanaterana an-tserasera.